I-UPSOCL - Indawo yokuphefumlelwa - ii-Geofumadas
Agasti, 2014 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ingqamaniso yayo ilula, ngaphandle kwamacwecwe, ngaphandle kweentengiso, ifom yefowuni kunye nemenyu engabonakaliyo neendidi ezintlanu.
Liyindawo yokuthetha isiSpanish i-UPSOCL, eyanikezelwa ukwabelana ngezinto ezibalulekileyo kwihlabathi. Izinto eziphambilibaleka, izinto ezinomdla, kunye nezinto ezimele zibonwe.
Igama layo livela kwi-UP = ngentla ngesiNgesi. Siyicinga ukuba ngenxa yembono kwimeko yaseChile, i-CL yayinomhla wokuba isiqalo; kodwa ngoku ukuba kunabasebenzi abahlukeneyo, i-SOCL yindlela yokugqitywa kwegama leNtlalo.
Ekugqibeleni, kunye ne-58 abalandeli abankulungwane kwi-Twitter, malunga ne-100 lamawaka abhalisele kwi-YouTube kunye nezigidi ezingaphezu kwezi zimbini ezithandayo kwi-Facebook, akubalulekanga ukuqonda ukuba kutheni. Ngamazwi abhali:
Yintoni eyayiza kwenzeka xa siyeka ukusebenzisa i-Intanethi ukubona inja ixoshe umsila wayo okanye umntu ewela emlanjeni kwaye saqala ukuyisebenzisa ukuze Sasaza iingcamango ezingatshintsha indlela esiyibona ngayo ihlabathi? Yintoni eyayiza kwenzeka xa sithatha isixa esininzi seengcamango ezingekho kwiSpanish kunye Masikuphelise isithuba seelwimi? ... Yile ndlela u-Upsocl azalwa ngayo.
Kwaye, umzekelo, amaqaku e-7 ukuba uye wakuva ngokuvakalayo kumanethiwekhi, kwaye aphakanyiswe kwi-UPSOCL:
Iimephu ze-35 eza kukunceda ukwenza ingqiqo yehlabathi.
Amabhuloho kunye namanyathelo okwenziwa kwezilwanyana zasendle:
Zezobulo ukuba basebenze kunye neNdalo kwaye bangabi nxamnye nayo.
29 iifoto zexesha elidlulileyo Baza kukubonisa ngokuhleka kwehla, indlela izinto ezitshintshile ngayo.
Umzekelo, isithuthi sokubambisa amabanjwa.
Ngaba uye wabuyela ngaphaya kweendlela oku kuGoogle Earth?
Kufuneka ubone ukuba yintoni, njani kwaye kutheni benza njalo.
Yintoni eya kwenzeka ukuba I-GPS iya kuqala ukuthetha nawe?
Zininzi iziqulatho nazo ziividiyo. Abanye banomdla njengoko behlekisayo.
Andizange ndimbone Ingxabano yakwaSirayeli-Palestine caciswa ngokugqithiseleyo.
Ngexesha apho isihloko sifanelekile ...
Iimbono ezintle, ezitshintsha ubomi babantu.
Kubonakala ngathi kulula kwalabo abangenazo iimfuno ezibalulekileyo.
Ukuhlonipha kwethu abahlobo be-Upsocl.
Apha unokutyelela isayithi. http://www.upsocl.com/
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukusetyenziswa kwemithetho yeengcinga kwiimeko ze geospatial
Post Next Ukusetyenziswa kwe-GIS ukulawula nokukhusela iDengueOkulandelayo "